Arsenal Oo Kula Dagaalami Doonta Paris Saint-Germain Saxiixa Lucas Paqueta
HomeWararka CiyaarahaArsenal oo kula dagaalami doonta Paris Saint-Germain saxiixa Lucas Paqueta
March 8, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka France, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa in ay ku biirtay tartanka loogu jiro saxiixa xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Lyon ee Lucas Paqueta xagaaga.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Brazil ayaa soo jiitay xiisaha xanta ah ee qaarada oo dhan ka dib qaab ciyaareedkiisa Ligue 1 xilli ciyaareedkan, iyadoo kooxda reer France ee Paris-Saint Germain lagu tilmaamay inay tahay meesha ugu macquulsan.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay Calcio Mercato , Arsenal ayaa ku biirtay raacdada ay ugu jirto kooxda uu hogaamiyo Mauricio Pochettino , iyadoo Gunners ay dooneyso inay kor u qaaddo weerarkeeda suuqa kala iibsiga ee soo socda.
24-sano jirkaan ayaa hadda loo aqoonsaday inuu yahay bartilmaameedka suurtagalka ah, isagoo ka qeyb qaatay todobo gool iyo afar caawin 25 kulan oo uu u saftay horyaalka Faransiiska xilli ciyaareedkan, inkastoo kooxdiisa ay ku dhibtooneysay xilli ciyaareedka oo dhan.
Ololaha noocan oo kale ah ayaa ka dhigay rikoorkiisa 18 gool iyo 11 caawin ah kooxda Lyon ka dib markii uu ka soo dhaqaaqay AC Milan 2020, halka uu sidoo kale lix jeer shabaqa soo taabtay 29 kulan oo uu u saftay Selecao.